साहोको ‘ब्याड ब्वाई’मा देखिएकी ज्याकलिनले लिइन् दुई करोड | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more साहोको ‘ब्याड ब्वाई’मा देखिएकी ज्याकलिनले लिइन् दुई करोड
February 26, Wed
साहोको ‘ब्याड ब्वाई’मा देखिएकी ज्याकलिनले लिइन् दुई करोड
भदौ ६ गते, २०७६ - १७:३२
मुख्य समाचार, रंग/तरंग
एजेन्सी । हिन्दी फिल्म ‘साहो’को केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको ‘ब्याड ब्याई’ गीत अहिले निकै चर्चामा छ । गीत अहिले युट्युबको टे्न्डिङमा छ । सार्वजनिक भएको छोटो समय अर्थात ४ दिनमै गीतको हिन्दी संस्करणलाई मात्रै २ करोडभन्दा बढिले हेरिसकेका छन् ।
‘साहो’को सार्वजनिक ‘ब्याड ब्वाई’मा अभिनेता प्रभाष र अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज देखिएकी छन् । गीतको चर्चासँगै गीतको अभिनयका लागि ज्याकलिनले लिएको मोटो रकमको पनि चर्चा भएको छ । भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार अभिनेत्री ज्याकलिनले यो गीतको लागि मात्रै दुई करोड भारतीय रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकी छिन् ।
फिल्मको यस गीतलाई –यापर नीति मोहनले आवाज दिएका छन् । अभिनेता प्रभाष र श्रद्धा कपुरको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म आगामी ३० अगस्टमा रिलिज हुँदैछ । फिल्म हिन्दी, तमिल, तेलेगु र मलायालम भाषामा एकसाथ आउनेछ ।
भदौ ६ गते, २०७६ - १७:३२ मा प्रकाशित
दिल्ली हिंसामा २० जनाको ज्यान गएपछि केजरीवाल बोले : तुरुन्त सेना तैनाथ गर, कफ्र्यु लगाउ !
काठमाडौं । उत्तर–पूर्वी दिल्लीमा केहि दिनदेखि भड्किएको हिंसामा परि २० जनाको ज्यान गएकाे छ । घटनामा...
जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलवहादुर रम्तेलको स्मृतिमा विविध कार्यक्रम
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)द्वारा संचालित जनयुद्धका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने प्रथम सहिद...
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, विभिन्न विधेयकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजेदेखि बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको...
नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, बाँस्कोटा अडियो प्रकरण र एमसीसीबारे छलफल हुने
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्रीको...
देशभरको मौसममा बदली, मंगलबार राति मेघगर्जनसहित पानी पर्ने अनुमान
काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यकासहित देशभरको मौसममा बदली आएकाे छ । मंगलबार दिउँसाेदेखि देशका मध्य,...
विप्लव समूहद्वारा भोलि शैक्षिक आम हड्तालको घोषणा (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडाैं । नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहले फागुन १४ गते शैक्षिक आम हडतालको घोषणा गरेको छ । विप्लव...
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कहाँ कति ? सरकारले सार्वजनिक गर्यो श्वेतपत्र (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचलसम्पत्तिबारे श्वेतपत्रमार्फत विवरण सार्वजनिक...
संसदभित्र शर्मनाक अवस्था, गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठक नै स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक गणपुरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ । बैंक तथा वित्तिय...
गणपुरक संख्या नपुगेपछि संसदमा बजाइयो घण्टी
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापना विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत...
देशको स्वास्थ्यको लागि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ : गगन थापा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन...
अझै उठेनन् भूकम्पले ढलेका निजी आवास
मानवअधिकारवादी संस्था ‘हस्टेल फर हुमनिटी’ नेपालमा
साढे एक करोड कारोबार गर्दै सकियो खोटाङ दिक्तेल महोत्सव
युरोपेली देशहरूमा नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै
बन्धक बनाएर लागुऔषधको नशा दिइयो र बलात्कार गरियो : गायिका डफी
तीन वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कानूनी शिक्षा अभियान !
आज पनि सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति छ ?
सरकारले मगर दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने
दिल्लीमा दंगा, हिंसाबारे ट्रम्पले के भने ?
नेप्सेमा उछाल, ४३ अङ्कको वृद्धि
अब जनप्रतिनिधिले तलबको सट्टा भत्ता पाउने
हुलाकी राजमार्गको तिन सय ८५ किमी कालोपत्र